Mutungamiri weIbhetshu Likazulu, VaMbuso Fuzwayo, vanoti sangano ravo harizi kufara nekuitirwa kwemhemberero dzebhavhudhe raVaMugabe kuMatopos vachiti nzvimbo iyi iri pedyo nenzvimbo yeBhalagwe kunove kune Antelope Mine, uko vanoti kwakakandwa vamwe vanhu vakawanda panguva yeGukurahundi.
Sangano reIbhetshu likazulu nderimwe remasangano anorwira kuti nyaya yeGukurahundi itaurwe nazvayo kuitira kuti munyika munyatsove nekuregererana kwechokwadi uye kuti vanhu vagokwanisa kuviga hama dzavo zvakanaka.
VaFuzwayo vaudza Studio 7 kuti nekuda kwekuti VaMugabe havasati vada kutaura zvizere uye kukumbira ruregerero panyaya yeGukurahundi, kuuya kwavo kunzvimbo iyi vachizopemberera bhavhudeh ravo kunotsamwisa hama dzevanhu vakaurayiwa panguva yeGukurahundi iyi.
VaFuzwayo vatiwo kupemberera bhavhudhe remutungamiri wenyika munzvimbo ine vanhu vakawanda vanotambura uye panguva iyo veruzhinji munyika vari kunhonga svosve nemuromo mucherechedzo wehutungamiri husina hany'a nevanhu.
Mutauriri webato reZAPU, Va Iphithule Maphosa, vati hapana chakaipa pakupemberera bhavhudhe remutungamiri wenyika vachiti izvi zvinhu zvinogara zvichiitwa gore negore.
Asi vatsinhirawo kuti kuitira mhemberero idzi kuMatopos kunorwadzisa hama dzevanhu vakaurayiwa panguva yeGukurahundi.
VaMaphosa vati bato ravo ragara richibuda pachena pakuti zvakakosha kuti nyaya yeGukurahundi itaurwe nezvayo vakatiwo ishuviro yavo kuti VaMugabe vashamise vanhu nenzira yakanaka vagotora mukana wemhemberero idzi kuti vataure pamusoro penyaya iyi.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kubato reZanu PF panyaya iyi.
Asi munyori mukuru weboka revechidiki mubato iri, VaKudzai Chipanga, vaudza bepanhau reNewsday kuti havanei nezvinofunga vanhu vakawanda pamusoro pekuitwa kwemhemberero idzi kuMatopos vachiti chinangwa chavo ndechekushandisa mhemberero idzi kuedza kusimudzira mabasa ezvekushanya munyika.
Hutungamiri hweZanu PF kuMatabeleland South hwakaudza bepanhau reChronicle kuti vari kuenderera mberi nekutsvaga mari yekuita mhemberero idzi.
Murongi wemabasa musangano reNational Youth Development Trust, VaBhekumusa Moyo, vati pane kushora kuitwa kwemhembero idzi kuMatopos, vanhu vanogona kushandisa mukana wechiitiko ichi kuti vakumbire VaMugabe kuti vabude pachena panyaya yeGukurahundi iyi.
Gukurahundi inguva yakasiya vanhu vakawanda kuMatabeleland ne Midlands zvichitevera kupinda kwakaita mauto eFifth Brigade mumatunhu aya achiti airwisa ma dissidents.
Sangano reCatholic Commission for Justice and Peace rakaburitsa ongororo yakaratidza kuti vanhu vanosvika zviuru zvina vakaurayiwa, rikatiwo huwandu hwevanhu ava hunogona kusvika kumakumi maviri ezviuru, kana kudarika.
Mhemberero dzebhavhudhe raVaMugabe dzinogara dzichiitwa munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika gore rega rega dzichitungamirwa nevechidiki vebato reZanu PF asi vakawanda vanogara vachishora chiitiko ichi vachiti kutambisa mari inogona kuve ichishandiswa pakuita zvimwe zvinhu zvakakosha.